MUHIIMADA AKHRISKA IYO QORAALKA U LEEYIHIIN MASKAXDA?
Wednesday December 12, 2018 - 02:56:55 in XULASHADA by M Ayaanle
Qorra abdikariin Karaama
Diinta islaamku waxaa ay muhiimad weyn siisaa aqoonta iyo kasbashadeeda. Aayadii ugu horeysey ee quraanka kariimka, waxaa ay ahayd mid rasuulkeena (NNKH) lagu amray inuu wax akhriyo. Ilaahay subxaanu watacaalaa waxaa uu yiri. " akhri” adigoo kaashanaaya magaca rabbigga ku abuuray. ( suurada Iqra , aayada 1.aad). Suuradaan waxaa kaloo uu ilaahay ku magacaabay oo ku xusay mid ka mid ah aaladaha loo adeegsado aqoonta iyo tacliinta kaas oo ah " Qalinka”. Ilaahay waxaa kale oo Rasuulka (NNKH) ku amray inuu rabbiggiisa ka baryo in aqoontiisu kor u kacdo.Raadinta aqoontu waa waajib, waana qodob meel sare kaga xusan diinta islaamka.Horumarka wadan iyo ilbaxnimada aadamiga waxaa ay ku xiran yihiin hadba awooda ay dadku u leeyihiin iney wax akhriyaan. Sidaas darteed waxaa jira xiriir weyn oo ka dhexeeya akhriska, kasbashada aqoonta iyo kobcitaanka maskaxda iyo maanka.
#Ogaanshaha#wax#cusub: Dunida aynu ku dhaqanahay ma aha mid taagan balse waa mid mar walba uu ku yimaado isbedel. Waxyaalo horay u jirey ayaa dunida ka dhamaanaaya, waxaana soo kordhaaya waxyaalo cusub oo aan horay loo aqoon. Sidaas darteed akhriska badani waxaa uu kuu fududeynayaa inaad wax badan duniga ka ogaatid dunida kugu wareegsan.
Daawo Dhulkii Laga Dhisayay Madaxtooyada Cusub ee Somaliland oo la Sheegey in ay Noqdeen Beero ay Shacab leeyihiin iyo oday dhaqameed Madaxwaynaha Udirey baaq kulul
Daawo Qaabkii Dawlada Faderalka Soomaliya Ay Ciidamada Burundi Ugasaartay Kuliyada Jaale Siyaad Iyo Muhiimada Kuliyadaasi
Al-Shabaab Oo Duqaysay Saldhigyo ay Ciidamada Itoobiya Kuleeyihiin Deeganada Soomaliya Iyo Deeganada Duqayntu Ka Dhacday Iyo Faah Faahin
Diyaarado dagaal oo xalay duqeeyay Saldhigyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin Jannaale Iyo Al-Shabaab Oo Warkasoo Saartay Weerarkasi
Daniraha Dawlada Turkiga Uqaabilsan Wada Hadalada Soomaliya Iyo Somaliland Oo La Kulmay Hogaanka Sare Ee Xisbiga Waddani Oo Madaxda Qaar ayku Tuhunsanyihin in ay Xidhiidh La Leeyihiin Dawlada Xamar.
Dhalinyaro Horey Loo Shaaciyay Wajiyadoda Oo Lagu Tuhunsanaa In ay Ku Lug Leeyihiin Weerarkii Nairobi Oo Isku Dhiibey Ciidamada Kiiniya (Akhriso faah faahin)
Hay'addaha Amaanka Ee Kiiniya Oo Xabsiga Dhigey Dad Lala Xidhiidhinayo in ay Ku Lug Leeyihiin Weeraradii Nairobi